VISIT FLORIDA yethula ukufinyelela ihabhu yokuhamba
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Ezokuvakasha Ezitholakalayo » VISIT FLORIDA yethula ukufinyelela ihabhu yokuhamba
Ezokuvakasha Ezitholakalayo • Izindaba Zezinhlangano • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha
Emizameni yokuqhakambisa iSunshine State njengendawo ephezulu yokufika ukuhamba kwezidingo ezikhethekile, VAKASHELA UFlorida wethule indawo yokuvakasha enezinsiza eziningi zabahambi abanezidingo ezikhethekile ezahlukahlukene. Izivakashi zingaluthola kalula ulwazi olutholakala kokuhehayo, amabhishi, amapaki, imicimbi nokuningi.
VAKASHELA UMongameli we-FLORIDA kanye ne-CEO uDana Young uthe, “IFlorida yaziwa ngamapaki ayo athokozisayo, amapaki wombuso asesimeni esihle namabhishi amahle, kepha okungenzeka izivakashi zethu azikwazi ukuthi eziningi ziyafinyeleleka kubahambi abanezidingo ezikhethekile. Sifuna ukukhipha ingcindezi ekuhleleni iholidi laseFlorida futhi siqinisekise ukuthi bonke abahambi bayazi ukuthi iSunshine State iyindawo lapho noma ngubani onekhono angayijabulela. ”
Amapaki wezindikimba zaseFlorida nokuheha kunikela ngezinsizakalo zezivakashi eziqukethe imininingwane nosizo kufaka phakathi izihlalo ezinamasondo, abahumushi bolimi lwezandla, amadivayisi okulalela, njll. Abahambi abakhubazekile bangathola ngisho nenjabulo yokugibela abagibeli abaningi abafinyeleleka kulabo abahamba ngezihlalo ezinamasondo.
Amabhishi amaningi aseFlorida asezingeni lomhlaba namapaki ombuso nawo anobungane nesihlalo sabakhubazekile, ahlinzeka ngezindlela zasolwandle ezifinyeleleka ngezihlalo ezinamasondo kanye nokuqashwa kwezihlalo zabakhubazekile. ICrandon Park Beach kuKey Biscayne naseHaulover Beach eMiami inikezela ngokuqashwa kwama-wheelchair amahhala. AmaPaki amaningi eFlorida State nawo anikela ngamasayithi ekamu afinyelelekayo, imigwaqo kanye nezinkundla zokudlala. I-Oscar Scherer State Park eSarasota County inikeza ukwethulwa kwe-kayak nokuhamba ngesikebhe nezihlalo ezinamasondo zasolwandle.
Imindeni enezingane ezinezidingo ezikhethekile nayo izoba nenqwaba yezinketho lapho ihlela amaholide ayo eFlorida, kufaka phakathi isigaba sokuhamba nezingane ezine-Autism. Imephu exhumanayo nezindatshana ezinemininingwane zenza ukuhlela kwemindeni kube lula futhi kuthembeke. Vakashela okuhehayo okulungele umndeni njengeMuseum of Science and History eJacksonville, okushukumisa umcabango ngeplanethiyamu yayo kanye nemibukiso yesayensi esebenzayo.
Ukuze uhlole kabanzi mayelana nohambo lwezidingo ezikhethekile zaseFlorida, vakashela VISITFLORIDA.com/Accessible.
Amadili ebhizinisi anika amandla ngosuku lwesibili lwe-IMEX America
Ijaji lizozwa indiza ye-American Airlines...